Kuvaka Stronger Brand Awareness Using Five SEM Strategies From Semalt
Vafinisi vebhizimisi vanofanira kunzwisisa kuti SEM kana mazano eSOO haasi kuchinja uye haazokusimudziri mazita ekuzivikanwa. Chikonzero chacho ndechekuti kutsvaga maitiro ekugadzirisa nguva dzose kunoshanduka. Sezvo kuchinja uku kuchiitika, saizvozvo mabhizinesi anofanira kushandisa shandisa mukana wega wega. Ndiyo nzira chete iyo ROI yekambani ichapfura. Izvi zvinotevera nhanho shanu shanu inotsanangurwa naIgor Gamanenko, iyo Semalt Mutengi Wekubudirira Kwemutengi, achibatsirwa naiye anogona kuvandudza nharaunda SEO nheyo.
1. 54% veAmerica vanotengesa vanhu vakashandura kubva kushandisa mabhuku efoni kuongorora internet nekuita kutsvaga kwezvinhu zvezvinhu kana mabasa. Icho, saka, zvinoreva kuti vatengi vemo vanoita mushure webhizimisi uye varidzi vanofanira kuedza kugutsa zvido zvavo kana vachizopona mhizha. Muenzaniso weiyo ndeye Parsons Behle uye makambani emutemo eLatimer aibva kuUtayh, ayo anovandudza vatengi varo pamusoro pezvinoitika nhau kana mutemo wepanyika unogona kuvakanganisa kuburikidza newebsite yavo. Vanovimba neSEM kuti vatakure motokari kunzvimbo dzavo, uye zvipo zvinotevera kune nzvimbo yavo.
2. Kushamwaridzana uye kutsanangurwa kunobva munzvimbo dzinochengeterwa nzvimbo kunowedzera sezvinhu zvinokosha kumakambani ekuzivisa mazita ebhizimusi. Vanovandudza hupenyu hwehupenyu pamwe chete nekuendeswa kwemotokari kubva kuSOO. Zvakakosha kuziva kuti kushamwaridzana uye kutsanangurwa ndezvimwe zviratidzo zvepamusoro zveGoogle's algorithm yekutsvaga. Ikutumira kunoita sevhoti dzekutendwa izvo zvinoita kuti kambani iwedzere mune SEO inobva pakuvimbika inowanikwa..
3. Ramba uri pamusoro pemabasa ako ePPC. Zvakajairika kuwana vashandi vebhizimisi vanofunga kuti vanogona kuvimba nechivimbo cheP PPC uye nokukurumidza vanotarisira mhinduro. Google AdWords ndiyo yepamusoro yekutengeserana, uye kune imwe yekuona ROI chero ipi zvayo, inofanira kuva nyanzvi mumunda. Kumhanyira mubhadharo-per-click campaign inoda ruzivo uye kunzwisisa kana munhu anotarisira kuti marwadzo avo aonekwe zvakanaka. Mumba-kutengesa kunogona kuonekwa kubatsira kubatsira kuchengetedza mari, asi vadzidzisi vemabhizimisi vanofanira kukwereta unyanzvi kuti aite PPC kwavari sezvo ndiyo ndiyo nzira yakanakisisa munguva refu.
4. Mifananidzo iri yakanaka, asi kufamba kune mifananidzo kunotova nani. Zviri nyore kupa ruzivo rwechigisi uchishandisa zvipupuriro kubva kune vanhu vakashanda nekambani kare, kana infographics inoratidza izvo kambani inomirira. Zvisinei, mavhidhiyo anowanzoita izvi zvakanyanya. Kunyangwe zvakadaro, munhu anofanira kuyeuka kuisa chinyorwa mumavhidhiyo yakadai recipe tip, mazano emari asingabhadharwi, kana mazano pamusoro pokuti ungawana sei chikwata chekuderedza panzvimbo. Kana zvisina kudaro, vhidhiyo haigoni kuita zvakanyanya sezvinodiwa. Google yakaisa mari yakawanda mumutambo weYouTube, uye inoitika kuitira kuti ive nzvimbo yakakurumbira kune firms inotarisira kubata chikamu chikuru chekutsvaga misika yemunharaunda.
5. Misika kune Mireniyali. Parizvino, pane inofungidzirwa mamiriyoni 86 emireniyoni, zvichireva kuti iyo niche inobatsira. Kana ikasa risati rasvika kwavari kuburikidza nemapurogiramu awo emafaira efoni, ipapo pane mukana wakareba kuti hausviki neboka. Pakazosvika gore ra2018, zvikwata zvepashamba zvinowanikwa munzvimbo ino zvichaita zvinopfuura hafu yemari inoshandiswa pamashamba.
Nzira yakanakisisa ndeyekutenderera kune SEO mazano uye matanho mashanu anotaurwa munyaya iyi ichabatsira kuita izvozvo, uye kuvandudza ROI yebhizimisi Source .